Tag: mgbahapụ | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 22, 2020 Tọzdee, Ọktoba 22, 2020 Douglas Karr
Ọ na-eju m anya mgbe m zutere onye ahịa nwere usoro ndenye ego n'ịntanetị yana ole na ole n'ime ha gbalịrị ịzụrụ site na saịtị nke ha! Otu n'ime ndị ahịa ọhụrụ anyị nwere saịtị ha tinyere ego dị na ya ma ọ bụ usoro 5 iji si n'ụlọ mbụ gaa ụgbọ ibu azụmahịa. Ọ bụ ọrụ ebube na onye ọ bụla na-eme ya dị anya! Kedu ihe ịhapụ Ntanye Cartzụ ahịa? Ọ nwere ike
O doro anya na ị na-emepụta ma na-arụ ọrụ ịzụ ahịa ịzụ ahịa dị irè nke ọrụ mgbasa ozi email. N'ezie, ihe karịrị 10% nke ozi ịntanetị gbahapụrụ agbahapụ meghere, pịa. Onu ogugu onu ahia nke izuta site na ozi ịntanetị gbahapụrụ bu 15% kariri ihe ndi ozo I nweghi ike ịlele ebumnuche karịa karịa onye ọbịa na saịtị gị na-agbakwunye ihe na ụgbọ ibu azụmahịa gị! Dị ka ndị ahịa, ọ dịghị ihe ọzọ obi na-egbu mgbu karịa mbụ ịhụ a nnukwu inflow
Enwere ọtụtụ isi n'okporo ụzọ ịzụta ebe ndị na-ere ahịa nwere ike ịnakọta ma jiri data iji mee ka ahụmịhe ịzụ ahịa ahụ ka mma wee gbanwee ndị nchọgharị ka ha bụrụ ndị na-azụ ihe. Mana enwere ọtụtụ data na ọ nwere ike ịdị mfe ilekwasị anya n'ihe ndị na-ezighi ezi ma hapụ usoro. Dịka ọmụmaatụ, 21% nke ndị na-azụ ahịa na-ahapụ ụgbọ ha naanị n'ihi na usoro ndenye ọpụpụ adịghị arụ ọrụ. Tozọ ịzụta nwere ọtụtụ isi ebe ndị na-ere ahịa nwere ike ịnakọta
O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala na blọọgụ anyị na ọ bụrụ na òké gị pụọ na peeji ahụ ma chee ihu na adreesị adreesị (na ị debanyeghị aha), na ngalaba ndenye aha na-egosi. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma… na anyị amụbawo anyị nnweta mgbalị nke ndị debanyere aha si Ọtụtụ narị kwa ọnwa. A maara nke a dị ka ebumnuche ọpụpụ. Ibiaghachi Exchange nwere ikike patent Exit-Intent na teknụzụ nke na-ahụ mmegharị ahụ, ọsọ nke oke ahụ, ebe oke ahụ, na
You'regaghị enweta 100% nke ahịa mgbe mmadụ tinyechara ngwaahịa ahụ na ụgbọ ibu azụmahịa gị, mana obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ọdịiche ebe ego na-abawanye. Enwere usoro iji dọpụta ndị mmadụ azụ na back ịtụgharị uche bụ otu n'ime ha. Mgbasagharị ahịa na-esochi ndị mmadụ mgbe ha hapụrụ ụgbọ ahịa na mgbasa ozi na-ebugharị ha ka ha na-eleta saịtị ndị ọzọ. Nloghachi ahụ dị mma na mkpọsa nlọghachi. Agbanyeghị, nke ahụ bụ mgbe ha mechara